Wararka Maanta: Sabti, Mar 10, 2018-Mareykanka oo sharuud ku xiraya wadahadallada Waqooyiga Kuuriya
Sabti, Maarso, 10, 2018 (HOL) -Warka ku saabsan kulanka labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo ah mid hadal heyn weyn ka dhalisay dunida inteeda kale, ayaa waxaa soo baxaya in Mareykanku sharuud ku xirayo qabsoomida wada hadalladaas.
Madaxwayna ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in go’aanka Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan in hogaamiyahooda uu la kulmo madaxwayne Donald Trump ayaa heegay in Mareykanka ay sii wadi doonaan cadaadiska lagu hayo Pyongyang ilaa laga hirgalinayo hadafka ah in ay ka tala-baxdo barnaamijkeeda hubka Niyukleerka.
Dhinaca kale Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in aysan jirin waqti iyo goob cayiman oo loo asteeyay inay ka dhacaan wadahadalada la sheegay inay dhexmari doonaan madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka, Sarah Sanders, ayaa sidoo kale ku gacan seyrtay in madaxweyne Trump uu aqbalay casuumaada ay fidisay xukuumadda Pyongyang shuruud la’aan.
Mar sii horeysay Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Heshiis lala gaaro Kuuriya Wuqooyi uu yahay mid muhim ah.
Siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal siyaasadeed ayaa sheegay inkastoo wada hadalladani yihiin kuwo loo riyaaqo, haddana dhinaca kale ee aan wali la hubin sida ay ku dhici karaan, madaama labada hogaamiye ee la filayo in ay isa soo hor fariistaan mid walba oo ka mid ah laga fili karo go’aan kii hore ka duwan.